आँखाको रङबाट यसरी थाहा पाउनुहोस कुनै पनि मानिसको व्यक्तित्व र स्वभावका राज ! - sandeshpost
Home > रोचक > आँखाको रङबाट यसरी थाहा पाउनुहोस कुनै पनि मानिसको व्यक्तित्व र स्वभावका राज !
आँखाको रङबाट यसरी थाहा पाउनुहोस कुनै पनि मानिसको व्यक्तित्व र स्वभावका राज !
March 12, 2018 admin80
अक्सर मानिसहरुको कालो र खैरो रङका आँखाहरु हुन्छन। आज हामी तपाईलाई ६ प्रकारका आँखाहरुका बारेमा बताउनेछौं। आखिर कसरी ६ प्रकारका आँखा हेरेर मानिसहरुको स्वभाव पत्ता लगाउन सकिन्छ त ?
१. कालो आँखा: कालो रङको आँखा भएका मानिसहरु रहस्यमय हुन्छन र उनीहरुलाई पूर्वाभास अधिक हुन्छ। उनीहरु भरोसा गर्न लायकका हुन्छन र राजलाई राज नै बनाएर राख्न माहिर हुन्छन। कालो आँखा भएका मानिसहरु जिम्मेवार, उत्तरदायी र बफादार हुन्छन। उनीहरु कर्मठ र आशावादी हुन्छन।
नेत्र कालो हुने मानिसहरु धन-धान्य र वैभवले परिपूर्ण हुन्छ। पहेलो आँखा भएका मानिसहरु माता-पिताको लागि कष्टदायक साबित हुन्छन।
२. खैरो आँखा: खैरो आँखा भएका व्यक्तिहरु आकर्षक हुन्छन्, उनीहरु आत्मविश्वासी र रचनात्मक हुन्छन्। उनीहरु स्वभावमा दृढनिश्चयी हुन्छन, तर कहिलेकाहीं दोस्रोको साथ आफ्नो मत राख्न असमर्थ हुन्छन।
३. घमिलो आँखा: यस्ता आँखा भएका मानिसहरु स्वाभाविक रुपमा मोज-मस्ती र रोमान्स मन पराउँछन। उनीहरु समयसँग हिड्न र परिस्थितिसँग संलग्न हुन जान्दछन्। उनीहरु साहसी हुन्छन र नीरसताको जीवनबाट चाँडै अघाउँछन्। मानिसहरु उनीहरु प्रति सहज रुपले आकर्षित हुन्छन्।
४. खरानी रङ: खरानी रङको आँखा भएकाहरु प्रभावशाली, सशक्त र विनम्र हुन्छन। उनी धेरै कम आक्रामक हुन्छन र कम अपमानजनक व्यवहार देखाउँछन्। उनीहरु प्रेम र रोमान्स तिर अत्यन्तै गम्भीर हुन्छन। उनीहरुको आन्तरिक तागत, विश्लेषणात्मक सोच र तार्किक क्षमताले उनीहरुलाई जुनसुकै परिस्थितिमा नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउँछ।
५. हरियो आँखा: हरियो आँखा भएका व्यक्तिहरु बुद्धिमानी, उत्साहित र जीवन्त स्वभावका हुन्छन। उनीहरु आकर्षक र सुन्दर हुन्छन। उनीहरु हरेक काम जोसको साथ गर्छन। उनीहरु धेरै ईर्ष्यालु प्रकृतिका हुन्छन।
६. निलो आँखा : निलो रङका आँखा भएका व्यक्तिहरु अत्यन्तै आकर्षक, शान्त, तेज दिमाग र सम्बन्धमा विश्वास गर्ने स्वभावका हुन्छन। उनीहरु दोस्रोलाई खुसी राख्न हर तरहका प्रयासहरु गर्छन। उनीहरु दयालु र गम्भीर हुन्छन। उनीहरु स-साना कुराहरु गौण गर्ने बहिर्मुखी स्वभावका हुन्छन।
आँखाबाट व्यक्तित्वको पहिचान
रातो आँखा – रातो आँखा अहंकारको प्रतीक हो। जुन पुरुषको नेत्र रातो हुन्छ, उनीहरु क्रोधी, अनुक्रियाशील र शूरवीर हुन्छन। र उनीहरुमा कुनै पनि पद प्राप्त गर्न सक्ने सामर्थ्य हुन्छ।
सेतो आँखा – कोमलता, सौहार्दता तथा अहिंसा दर्शाउछ।
सानो आँखा – सानो आँखाले विद्याको कमी तथा संघर्षशील जीवनको संकेत गर्दछ। जुन पुरुषको आँखा सानो हुन्छ उनीहरु चतुर हुन्छन र उनको जीवन गरिबीमा व्यतीत हुन्छ। यस्ता मानिसहरु सन्यासी पनि हुन्छन।
खैरो आँखा – खैरो आँखा भएका व्यक्ति धनी, ऐश्वर्यवान तथा बुद्धिमान हुन्छन।
कमल नयन – कमल नयन भएका मानिसहरु धनी, ऐश्वर्यवान तथा बुद्धिमान हुन्छन।
गढिएको आँखा: गहिरो गरी गढिएको आँखा भएका मानिसहरुले सामान्य जीवन व्यतीत गर्छन। उनीहरु धनहीन तथा अल्प विद्या वाला हुन्छन।
रातो धब्बा जस्तो आँखा – यसले कामुकता र अधिक भोगवृत्तिको सङ्केत गर्दछ।
पुरुषको आँखा ठूलो भए – आँखा ठूलो हुने पुरुषहरु धैर्यशील र शान्त हुन्छन। यस्ता मानिसहरुमा नेतृत्व गर्न सक्ने गज्जबको प्रतिभा हुन्छन। उनीहरुको मित्रको संख्या पनि धेरै हुन्छ।
दु:खद खबर : यौनजन्य अपराधको अभियोगमा टोकियोमा एक नेपाली युवक पक्राउ
जातमा सानो ठुलो कोहि हुन्न: काटे एउटै रगत आउँछ, मरेर सबै खरानी हुने हो ’ : एसिड काण्डकी सिमा